Burma Partnership » UNFC Statement on Nationwide Ceasefire Agreement and In-Country Peace Building
UNFC Statement on Nationwide Ceasefire Agreement and In-Country Peace Building
By United Nationalities Federal Council • October 3, 2015
1. The root cause of the civil war that has been going on nearly 70 years in Burma/Myanmar is political, oraconstitutional problem. The people made up of various ethnic nationalities have endeavored consistently to resolve that fundamental problem peacefully by political means. However, as the ruling classes in successive eras, have followed false policies, the longest civil war in the world has been going on up to this day.
2. The Ethnic Armed Resistance Organizations (EARO), as alliance of the United Nationalities Federal Council (UNFC), had started to approach political dialogue with the effort of formulating framework for political dialogue. Accordingly, the EARO held talks with the Union Peace-making Work Committee (UPWC) officially2times and informally2times in Chiangmai, Thailand, in 2013.
3. For 17 months, the UNFC led Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) had held talks officially7and informally over 20 times with the UPWC in its effort to iron out the differences foraSingle Text, from 2013 to 2015. The Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) has come to contain7chapters, comprising of 33 articles. In June 2015, The EARO formed the Senior Delegation (SD), laid down the final program and continued further effort for about4months.
4. As the government side did not accept the signing of NCA by all the EARO in contravention of the provision of Article 33 of the NCA, the5EARO top leaders and the SD members met with President U Thein Sein in Naypyidaw on September 9, and tried to findaway for inclusiveness. However, as the government did not accept the signing of NCA by all the EARO, no agreement was reached. Under that situation, the government, after closing further talks on the NCA and accepting the inclusiveness, only in principle, is seen trying to get the NCA signed by some of the organizations.
5. As the NCA is going to be signed by only some organizations, it cannot beadecisive and complete one, because according to the provisions of the NCA, only if all the stake holders participate in the various levels of political dialogue, including the formulation of political framework, the Code of Conduct for troops of the two sides, rules governing the ceasefire etc., the UNFC believes sincerely thatagenuine and meaningful political dialogue can be attained and lasting and durable peace can be established.
6. Moreover, the UNFC sees that in the entire length of talks for the NCA, the occurrence of widespread and ceaseless offensives against the ethnic nationalities by the government armed forces has been the main stumbling block to achievement of nationwide ceasefire and peace in the country.
7. Due to the situations mentioned above, the people and the international community are urged to support and make effort concertedly for the emergence of genuine political dialogue and peace in the country. For the achievement of genuine peace and political dialogue, from the step of inclusive signing of the NCA, the UNFC on its part, will strive on, after finding pragmatic means and ways.
Nai Han Tha Vice Chairman (1) Ph: +66(0)80-503-0849 (Burmese)
Khu Oo Reh General Secretary Ph: +66(0)84-805-1344, +001 651 313 2908 (Burmese and English)
Download the statement in English and Burmese here.
၁။ မြန်မာပြည်၏ နှစ်ပေါင်း(၇၀)နီးပါး ဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းစစ်သည် နိုင်ငံရေးအခြေခံ (သို့တည်းမဟုတ်) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဿနာအကြောင်းရင်းခံကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေခံပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံမှ ခေတ်အဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်စိုးသူများအနေဖြင့် သဘောထား စေတနာမမှန်ကန်၍ ယနေ့ထိတိုင် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး သောပြည်တွင်းစစ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။
၂။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ UNFC တပ်ပေါင်းစုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင် ရေးဆွဲရေးကြိုးပမ်းမှုဖြင့် စတင်ကာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ(UPWC) နှင့် တရားဝင် နှစ်ကြိမ်၊ အလွတ်သဘော နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၃။ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) သည် နှစ်ဘက်၏ မတူညီသောမူများကို တစ်မူတည်း Single Text အဖြစ် NCCT အနေဖြင့် UPWC နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပွဲများ တရားဝင် (၇)ကြိမ်၊ အလွတ်သဘောအကြိမ် (၂၀)ကျော် ပြုလုပ်၍ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုနှစ်ကာလအတွင်း (၁၇)လကြာ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ NCA မူကြမ်းတွင် အခန်း(၇)ခန်းနှင့် ပုဒ်မပေါင်း (၃၃)ခုထိ ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းရေးကုိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့(SD)ကို စုဖွဲ့၍လည်း အပြီးသတ်လုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ကာ (၄)လခန့်ကြာ ထပ်ဆင့် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၄။ NCA တွင် ပုဒ်မ(၃၃)ဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး အတူတကွ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးအား အစိုးရဘက်မှ လက်မခံသည့်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက် နေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦးအပါအ၀င် အဆင့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ အားလုံးပါဝင်ရေးနည်းလမ်းကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရအနေဖြင့် NCA ၌ အားလုံးအတူတကွ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကို လက်မခံခဲ့ပဲ သဘောတူညီမှု မရရှိနိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေအောက်တွင် အစိုးရအနေဖြင့် NCA ဆွေးနွေးနေမှုကို အဆုံးသတ်၍ အားလုံးပါဝင်ရေးကို မူသဘောအရသာ လက်ခံပြီး၊
အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးသွားရန် ကြိုးပမ်းနေ သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၅။ ယခုကျင်းပမည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ အဖွဲ့အစည်းတချို့သာ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အတွက် NCA မှာ ပြီးပြည့်စုံသည့်အနေအထားတွင် မရှိနိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NCA စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များအရ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးမူဘောင် ရေးဆွဲခြင်း၊ နှစ်ဘက်တပ်များ လုိုက်နာရမည့် စစ်ဘက်ဆုိုင်ရာကျင့်ဝတ် နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပါအ၀င် အဆင့်ဆင့်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပါဝင်မှသာ စစ်မှန်၍ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဟု အလေးအနက် ယုံကြည်သည်။
၆။ ထို့အပြင် NCA စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဖြစ်စဉ်တလျှောက် အစိုးရတပ်မတော်ဘက်မှ တိုင်းရင်းသားဒေသများအား ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမှာ လက်ရှိတစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအား အဓိကအဟန့်အတား ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၇။ အထက်ပါအခြေအနေများအရ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်သောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် လူထုနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတို့မှ ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်ကြိုးပမ်းကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ UNFC တပ်ပေါင်းစုအနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးမှတဆင့် စစ်မှန်သောပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေ၍ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ဟံသာ – ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁) ဖုန်း – +66(0)80-503-0849
ခူဦးရယ် – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖုန်း – +66(0)84-805-1344 +001 651 313 2908
Tags: 2015 Elections, ASEAN, Ethnic Nationalities, Nationwide Ceasefire Agreement, Nationwide Ceasefire Coordination Team, United Nationalities Federal Council